TWT R & D ekipa
TWT manana tsara ambony ara-teknika R & D ekipa, fitaovana amin'ny nandroso marina tsara fitaovana R & D foibe sy ny fitiliana foibe, miaraka mahery sy 50 taona voangony teknolojia, R & D sy mpanamboatra avo lenta, angovo mamonjy sy fiarovana ny tontolo iainana avo-Tech entana ny orinasa ny R & D Standard TWT. TWT fampandrosoana sy ny famokarana ny vokatra efa nahazo mihoatra noho ny sy 20 Patents-pirenena am-polony maro sy ny loka, ary ny mpanorina ny orinasa Ministeran'ny milina famokarana fenitra miditra tsimoramora.
TWT Quality System sy Quality Assurance
Mijery entana izahay fiarovana sy azo antoka toy ny Enterprise toetra ny fanahy; in China miditra tsimoramora orinasa, isika no voalohany fahazoana taratasy fanamarinana ISO 9001 navoakan'ny DNV: 2008 Quality Certification System; ary izahay kosa nahazo toromarika EU Pressure Fitaovana 97/23 / EC (AK taratasy fanamarinana) sy ny orinasa taratasy fanamarinana ny CCS.
Mandrakariva isika manao mampiofana ara-teknika mpiasa mba hahazoana antoka fa afaka mahazo ny mpanjifa asa tsara indrindra ao amin'ny orinasa. Ny asa fanompoana matihanina ireo amin'ny manan-karena traikefa eo amin'ny fametrahana, debugging sy ny fikojakojana; ary ny vokatra dia amin'ny piesy lisitra. Tsy manome antoka fa afaka hifandray anao sy hanome anao mamaly ao anatin'ny 48 ora taorian'ny fitarainana na ny kalitao nahazo fanohanana ara-teknika avy amin'ny mpanjifa fangatahana na oviana na faritra eto amin'izao tontolo izao. Afaka mino koa, eto, dia afaka mahazo tsara mbola tsy nisy toy avo-tolotra.
"Ny finoana, Quality sy Fanavaozana" no fototra hasarobidin'ny TWT Company
ity rafitra zava-dehibe dia ny fototry ny Company ny hevitra sy ny kolontsaina,
toy izany tahaka ny TWT ny nitsanganany tamin'ny 1956.